प्रमुख अतिथि रहेछन् कवि श्री तुलसी दिवस । दूतावासको त्यो जमघट उनकै पर्खाइमा रहेछ । दिनभरिको धपेडीले लास्टै थकित थिएँ म । मलाई महामहिमसँग मुस्कान आदानप्रदान गरी गाँस टिपेर बाटो लागिहाल्न मन थियो । आउलान् कि भन्यो, अब त आउलान् कि भन्यो, हैन अब त कसो नआउलान् भन्यो। अहँ, तुलसी दाइको नाकमुख देख्नु छैन । नोबलकिशोर र गोविन्द सर अघि नै आइसकेका छन् । तिनका अनुहार हेर्छु, ती पनि थकित, दिक्क र क्लान्त छन् । तर निम्तालुले घरबेटीसँग केही भन्न नमिल्ने । भने भद्रतामा खलल पर्ने । यातनामय पर्खाइको निसासलाग्दो क्षणमा तुलसी दाइकै नितान्त मौलिक भाकामा मलाई ख्याँस्स कविता फुर्‍यो :
‘अति सुन्दर’, संक्षिप्त जवाफ आयो। तर पार्टनर, नेपालको लुरे अर्थतन्त्रले यो विशालकाय हात्तीलाई पाल्नै सक्दैन । पाल्न खोजे आफैँ थला पर्छ । मित्र, हाम्रालागि यो जति शान हो त्यति नै बोझ हो यो । प्रसङ्गवश, मलाई दूतावास भवनमाथि लुब्धमति लोर्केहरूको गिद्धदृष्टिको याद आयो । मर्मत–सम्भार गर्न नसकिने भो भन्दै तिनले भवन बेच्न खोजे । बेच्न खोज्ने सायद यसअघिका कुनै राजदूत र तिनका आसेपासेहरू थिए । बेलायतबासी नेपालीहरूले राष्ट्रवादको लयमा गर्जनमय विरोध बोले । भावुक र रुमानी लबजमा तिनले भने— बरु भोकै बसेर हामी यो भवनको रक्षा गर्छौँ, यसलाई बेचेर कमिसन हसुर्न पाइँदैन । बस्, बिक्रीको दाउ र कमिसनको च्याँखे गोपीक्याँच भयो । र, भवन धन्न बँच्यो । तर विकराल समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । भवन सायद सय वर्ष पुरानो होला । अब यसले दिनदिनै महँगो न महँगो मर्मत–सम्भार माग्छ । यथेष्ट मर्मत–सम्भार नगरूँ, भवन धूलिसात् हुन्छ । गरूँ, नेपालको दुर्लभ बजेटको निकै नै ढ्याके रकम यसमा झ्वाम् हुन्छ । त्यहीबेला नोबलले हो कि नरहाङले, मेरा कानमा एउटा व्यावहारिक जुक्ति सुझाए । सर्प पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने जुक्ति । दूतावास भवन भाडामा दिन सकिन्छ । अनि ? अनि यो भव्यतम् भवनको ढ्याके भाडाले अर्को ठिक्कको दूतावास भवनको भाडा तिर्न पनि पुग्छ, यसको बकाइदा मर्मत–सम्भार गर्न पनि पुग्छ । तर फसाद छ † यसो गर्नु गोर्खाली शानविपरीत हुन्छ । र, त्यो गोर्खे राष्ट्रवादको मानविपरीत हुन्छ । नेपालको दरिद्रता र दीनता सारा जगत्का नजरमा पर्छ र नेपालको नाक ठनक्कै काटिन्छ । तब गर्ने के ? केही पनि नगर्ने । किन ? किनभने ओलीय स्वैरकल्पनाको चकाचक समृद्धिले यस्ता नाथे आर्थिक समस्यालाई कसो सहजै नटार्ला ? यहाँनेर लागेर बालकृष्ण सम सम्झनामा आए :